Qabaa’ilan Li’tacaarafuu | ToggaHerer
← Daawo: ” Cabdiraxmaan Ciro Waxyaalaha Qaarkood Waanu ku kala aragti Duwanayn .. Waxaa igu cusub Hadaladaa ka soo yeedhay Oo U Ee intii doorashada dabadeed Daalac dhac ayaa ka muuqanaaya” Wasiirkii hore ee madaxtooyada oo luxudka ka soo kacay kadib Eedii Siiraanyo
Maqaalka qormadan oo ah qaybtii labaad ee maqaalada aynu ku noolayn doono bisha in badan oo dadka muslimka ahi moogan yihiin ee SHACBAAN! →
Beel weynta Aadan-madoobe, sidii dagaalkii sokeeye ee qarnigii 19aad uu u kala qaxiyey, dib is ku ma aanay haybsanin, oo dib isku ma aanay raadsanin. Badankeedu’na is ma ba tirsadaan, oo beelo kale aya’ay ku kala dhex milanyihiin.
Inteeda istaqaanaa’ina, taariikhdoodii saxda ahayd ku ma socdaan, oo ku ma dhaqmaan, oo aad iyo aad, aya’ay u baalmarsanyihiin. Sababtu’na, muddo hore aya’ay dhacdey, oo dacaayado raqiis ahaa, aya’ay ka bilaabantey. Taasaa’na nasiib darradan keentey, oo beeshii kala furfurtey, oo midnimadeedii’na dhaawacdey.
Runtu’se waxa ay tahay, beesha Aadan-madoobe waa wada Ugaadh Aadan-madoobe. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah, aya’ay dagaalkii sokeeye gashey. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah, aya’ay kala qaxdey. Iyada oo Ugaadh Aadan-madoobe ah’na, wa’ay kala maqantahay.
Beeshu waxa ay u kala baxdaa:
Beeshu kala qaxitaankeedii ka dib, waxa ay ku kala sugantahay:
Iyo meelo badan, oo Geeska Afrikada Bari ah.
Hadda’ba beesha waxa la gudboon, in aanay waxii horey u soo daashadey, ee kala qeybqeybiyey, ee kala qobqobey, ee kala fogeeyey, in aanay dib u sii eeganin; oo intaas in ka badan’na aanay huursanin.
Duunyadatan kama liidataan, daaqi geedaha’e
Iyaba waa is doontaan hadday, kala dibboodaane.